Pyae Phyo (MMiTD): July 2014
♪ ယခုနှစ်အတွင်း သတ္တုကိုယ်ထည် ဖုန်းကိုသာ မိတ်ဆက်ပေးမည်ဟု Samsung ကတိပြု ♫
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လအနည်းငယ်အတွင်း screen အရွယ်အစား ကြီးမားသည့် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းအမျိုးအစား သစ်ကိုသာ ထုတ်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Samsung Mobile မှ စီနီယာ ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ကင်မ်ဟွန်ဂျွန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သူများထံ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အရွယ်ကြီး မားသည့် screen ပါဝင်သော ထုတ်ကုန်သည် Samsung ၏ နာမည်ကျော် Galaxy Note နောက်ဆုံးပေါ် အမျိုးအစား ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က ထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ၄.၈ လက်မ Galaxy Alpha ထုတ်ကုန်ကိုလည်း သြဂုတ်လတွင် မိတ်ဆက်ပေး ဖွယ်ရှိသည်။
Samsung သည် Galaxy S5 စမတ်ဖုန်းကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ငွေမှာ ပြီးခဲ့ သည့်နှစ်ထက် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း S5 သည် S4 ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုရောင်းချခဲ့ရကြောင်း၊ စုစုပေါင်း စမတ်ဖုန်း ရောင်းချမှုနှုန်းသာ ကျဆင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Samsung ကုမ္ပဏီကဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Samsung သည် စွမ်းဆောင်ရည် အနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်များကို ယခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ကာ မိတ်ဆက်ပေးမည်ဟု ကင်မ်ဟွန်ဂျွန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြောကြားခဲ့ သည်။
♪ Android အတွက် စွယ်စုံသုံး - System Tuner Pro v3.1.2 Apk Update (30-July) ♫
Android အတွက် စွယ်စုံသုံး ဆော့ဝဲလ် System Tuner Pro v3.1.2 Apk (Latest Version) လာပါပြီဗျာ။ Android ဖုန်းတစ်လုံးးရဲ့ battery, cpu, network, memory ကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်ပေးခြင်း၊ မလိုအပ်တဲ့ဆော့ ၀ဲလ်တွေ ကို uninstall လုပ်ခြင်း၊ Android ဖုန်းကို မြန်ဆန်သွက်လက်အောင် ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း။ Android ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ programs တွေကို ပိတ်ပေးခြင်း၊ ဖုန်းကို backup/restore လုပ်ပေးခြင်း၊ System app များကို ဖျက်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ Android ဖုန်းကို Reboot, Recovery , Bootloader, shudtdown လုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ APN, BT discovery, GPS & WiFi Localization ကိုဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android version 1.6 နှင့်အထက်မှာအ သုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးဝင် tools များစွာပါဝင်တဲ့ အတွက် Android ဖုန်းရှိသူတိုင်း အသုံးပြု သင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
★★ Battle Mechs Version: 0.5.589 Mod APK Unlimited Cash and Coins (Android Game) ★★
ဒီကောင်လေးကတော့ စက်ရုပ်တွေနေရာလုပြီးဖိုက်ကြတဲ့ဂိမ်းလေး up date လေးထွက်လာလို့မျဝေလိုက်
တာပါ ။ အရမ်းကြီးတဲ့စက်ရုပ်ကြီးတွေနဲ့ ဖိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး Unlimited လေးဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိကြိုက်တဲ့
ပါဝါတွေ စွမ်းအားတွေကိုအလွယ်တကူသုံးယူနိုင်ပါတယ် ရုပ်ထွက်မူကအစကြည်လင်ပြတ်သားမူကောင်း
လွန်းတာကြောင့်ကစားလို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါပဲ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 36 mb ရှိပြီး Android:2.3 နှင့်
အမျိုးအစား: Android Application , Android Game
★★ Bloodstroke Mod APK Unlimited Money Version: 1.0 (Android Game) ★★
android ဖုန်းအတွက် Bloodstroke Mod APK လေးရဲ့ New update လေးပါ ။ ဒီဂိမ်းလေးကတော့
မြောက်များစွာသောဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းတွေကို မိမိတစ်ကိုယ်တော်တိုက်ခိုက်ရမယ့် 3d ဂိမ်းလေး
ဖြစ်ပါတယ် ။ ရုပ်ထွက်လဲအရမ်းကောင်းပြီး Unlimited Money လေးဖြစ်သောကြောင့်ကစားရလွယ်ကူပြီး
သူငယ်ချင်းတို့အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 33mb ရှိပြီး Android : 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာ
TuneUp Utilities 2014 v14.0.1000.340 + Crack & Keygen Full Version
TuneUp Utilities ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မနေ့က Update ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Operation System တစ်ခုလုံးကို Optimize လုပ်ပေးနိုင်ပြီး PC အတွက်
အမျိုးအစား: PC Speed Up
The KMPlayer v3.9.0.126 Final Full Version
ဒီ KMPlayer software လေးကိုတော့မသိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပျူတာအများစုမှာတော့ VLC တို့ GOM player တို့ပြီးသွားရင် media player တွေထဲမှာ ဒီsoftware လေးကို
♪ Samsung Galaxy Alpha ကို သြဂုတ်လ လေးရက်နေ့တွင် ကြေညာမည် ♫
Samsung Galaxy Alpha ကို သြဂုတ်လ လေးရက်နေ့တွင် ကြေညာမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေပါသည်။ Samsung က အဆိုပါ Android ဖုန်းတွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် သတ္တုကိုယ်ထည်ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
Samsung မှ ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းများအရ Galaxy Alpha တွင် 720p Display တပ်ဆင်ထားသည်ဟု အတည်ပြုထားပါသည်။ အခြားထွက်ပေါ်နေသော သတင်းများအရ ၄.၇ သို့မဟုတ် ၄.၈ အရွယ် ထိတွေ့ မျက်နှာပြင်ပါရှိပါသည်။ Galaxy Alpha သည် အရွယ်တူ iPhone6ကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ် ထားပါသည်။
Galaxy Alpha တွင် Galaxy S5 ကဲ့သို့ Fingerprint Scanner နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုင်းတာပေးသည့် Sensor ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။ 32GB Internal Storage ပါရှိသော်လည်း MicroSD Card အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ဟု သိရပါသည်။ LTE ကို အသုံးပြုနိုင်သော Samsung ၏ Exynos Chipset ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။
ယခင်ထွက်ပေါ်ခဲ့သော သတင်းများအရ Galaxy S5 Alpha ဟု ခေါ်ဆိုမည် ဖြစ်သော်လည်း Samsung ၏ စာရွက်စာတမ်းများအရ Galaxy Alpha ဟု အတည်ပြုထားပါသည်။
Galaxy Alpha ကို Galaxy Note4မတိုင်ခင် ကြေညာမည် ဖြစ်သည်။
ပုံတွင် ညာဘက်မှ စမတ်ဖုန်းမှာ Galaxy Alpha ဖြစ်ပါသည်။
ဒီကောင်လေးကတော့ ဖုန်းတော်တော်များနဲ့ အခုထက်ထွက်လာတဲ့ android version 4.3, 4.4 ကိုလဲ Root လုပ်လို့ရပါတယ် .... ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်း ဒီ Root tool လေးကိုတော့ သိပြီးသားနေမှာပါ ....
အမျိုးအစား: Root Tools
ဒီကောင်းလေးကတော့3DText,3D Design,3D effects,image, video, gif animation,အစရှိသော 3D
ပိုင်ဆိုင်ရာ တွေကို ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးဆွဲပေးနိုင်တဲ့Aurora 3D Text & Logo Makeဆိုတယ်
softwareလေးပါဗျာ။ဒီကောင်းလေးကတော့ မိမိ အတွေအခေါ်ရှိသလောက် ရေးဆွဲပေးနိုင်တယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: 3D Software
★★ Storm of Darkness Mod APK Unlimited Money Version: 1.0.7 (Android Game) ★★
ကြမ်းကြမ်းလေးကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် hack ပြီးသား Storm of Darkness Mod APK လေးပါဗျာ ။ စက်ရုပ်လိုလို ဂြိုလ်သားလိုလိုအကောင်ကြီးတွေနဲ့ပက်ပက်စက်စက်ဖိုက်ရမဲ့ဂိမ်းလေးပါ ။
Unlimited Money လေးမို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လေဆာလက်နက်ကြီးတွေကိုအလွယ်တကူပဲအသုံးပြုနိုင်
ပါတယ် ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 29 mb ရှိပြီး Android : 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာကစားနိုင်ပါတယ် ။
ကမာရွတ်မီဒီယာရဲ့ သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Android Mobile App လေးထွက်ရှိလာပါပြီ
ကမာရွတ်မီဒီယာရဲ့ သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Android Mobile App လေးထွက်ရှိလာပါပြီ။
- သုံးစွဲသူတွေနဲ့ Friendly ဖြစ်စေမယ့် Responsive Design
- နေ့စဉ်သတင်းစာသားနဲ့ ဗီဒီယိုရုပ်သံတွေကို အချိန်နေရာမရွေး ကြည့်နိုင်မယ်
- Offline ဖြစ်နေချိန်မှာလည်း သတင်းတွေကို အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဖတ်နိုင်မယ်
- လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ Menu နဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် စုံစုံလင်လင်ဖော်ပြပေးထားတယ်
- မိုဘိုင်းလ် Phone ရော၊ Tablet နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေတယ်
- လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း Share လုပ်နိုင်မယ်
- iOS Version အတွက်လည်း မကြာမီ မိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
- Android Version 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းတိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Kamayut Media v1.0 for Android ကိုအောက်က Link မှာရယူပါ။
Kamayut Media v1.0 for Android အားရယူရန် (Google Play Link)
Kamayut Media v1.0 for Android အားရယူရန် (Direct Download Link)
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.myanmarmobileapp.com/2014/07/31/kamayut-media-v1-0-for-android/
အမျိုးအစား: Android Applocation
♪ YouTube က Video နဲ့ Music တွေကို ဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်ဆွဲပေးနိုင်တဲ့ - TubeMate2YouTube Downloader v2.2.4 (Modded) Apk ♫
အခုခေတ်က Android ခေတ်ဆိုတော့ အသုံးတည့်နိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။ ဖုန်းနဲ့ Internet ထဲမှာ Video တွေ သီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်သင့်တော်ပါတယ် ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်မှာတော့ YouTube လို့ရေးထားပေမယ့် အချို့သောဆိုဒ်တွေက Video နဲ့ သီချင်းတွေ ကိုလည်း ဖုန်းနဲ့ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။YouTube ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အသုံးပြုပုံကလည်း လွယ်ပါတယ်။ Application လေးကို Install လုပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ သီချင်း ဒါမှမဟုတ် Video ကို ရှာလိုက် ပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင်ဖွင့် လိုက်တာနဲ့ Download or Watch ဆိုပြီး မေးပါလိမ့်မယ့်။ ကြည့်ရုံဘဲဆိုရင်တော့ Watch ပေါ့ဗျာ။သိမ်း ထားချင်လို့ ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ Download ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းရုံပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် Internet ပေါ်က သီချင်း / Video တွေဟာ မိမိဖုန်းထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
★★ Trial Xtreme3Mod APK Unlocked and Unlimited Money Version: 6.4 (Android Game) ★★
စတန့်ဆိုင်ကယ်မောင်းချင်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် hack ပြီးသား Trial Xtreme3Mod APK လေးကိုတင်
ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ရေကြောင်းလမ်းတွေ တောင်ကြောင်းလမ်းတွေနဲ့အခန်းပေါင်း 100 ကျော်ပါဝင်ပြီး Unlocked and Unlimited Money ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အခန်းတွေကိုအလွယ်တကူဖွင့်ပြီး
ရွေးယူကစားလို့ရပါတယ် ။ ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲက OBB ဖိုင်ကို SDCARD/Android/Obb ထဲသို့ copy ကူးပြီး APK လေးကို Install လုပ်ကာကစားနိုင်ပါတယ် ။ Android : 2.3 နှင့်အထက်မှာကစားနိုင်ပါတယ် ။
★★ Active UNDELETE Enterprise 9.5.59 + Crack ★★
ဒီကောင်လေးကတော့ FAT, NTFS, NTFS + EFS, MacOS HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4 အစရှိသည့်
file systems များကို Recover လုပ်နိုင်သည့်အပြင် deleted သို့မဟုတ် damaged partitions အပိုင်းတွေ
ကိုလည်းပြန်ပြီး Restore ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။CD/DVD/USB disk ကိုအသုံးပြုပြီး data recovery လုပ်ယူနိုင်
ပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးပါ။Full ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ Crack ဖိုင်ကို
အမျိုးအစား: Recover Software , Software
♪ မည်သည့် User Manual ကိုမဆို အွန်လိုင်းမှာရှာဖွေခြင်း ♫
သင့်ရဲ့ပီစီ၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ် အခြားသော device အဟောင်းတွေ သို့မဟုတ် အသစ်တွေအတွက် သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ချက်စာအုပ်လိုအပ်ပါသလား ? Robert Zak က သင့်အနေဖြင့် သုံးစွဲသူလမ်းညွှန် စာအုပ် User Guide များကို အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်နေရာတွေကနေရှာဖွေလို့ရနိုင်မလဲ ဆိုတာတင်ပြထားပါတယ်။
ခေတ်သစ် hardware ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပီစီများမှသည် ရေခဲသေတ္တာတွေအထိ သူတို့နဲ့အတူ အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်များနဲ့အတူ လာကြပါတ်ယ။ အကယ်၍ ပါမလာခဲ့ရင် သင့်အနေဖြင့် manual စာအုပ်ကို လှန်လှောဖတ်ရှုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်အနေဖြင့် မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ website ကနေ online manual တွေကိုရှာဖွေလေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သင့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်သူ နဲ့မော်ဒယ်နံပါတ်တွေကို Google မှာရိုက်ထည့်ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသော ပီစီ၊ တက်ဘလက်၊ဖုန်းနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေမှာသူတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေထဲမှာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ထည့်သွင်းပေးထားကြပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် စာရွက်တွေအနေနဲ့လည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ရနိုင်မဲ့ digital manuals များက များစွာသော အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုရရှိနိုင်မှာပါ။ မည်သည့် device များမှမဆို download ချကာရယူနိုင်ပြီး အကယ်၍ စာရွက်အနေဖြင့်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း print ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းသင့်အနေဖြင့် အလွန်သက်တမ်းကြာပြီဖြစ်သော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ instructions တွေလိုအပ်တဲ့အခါ ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ website မှာလည်းမတွေ့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လုပ်သူများက website မရှိဘူး ဆိုပါစို့။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အွန်လိုင်းမှာ သက်တမ်းကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် hardware အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်များကို databases များအနေဖြင့်စုဆောင်းထားရှိထားပါတယ်။
Manual အဟောင်းများကို အွန်လိုင်းမှာရှာဖွေခြင်း
အကယ်၍ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် manual ကိုရှာဖွေမတွေ့လျှင် သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဆိုလျှင် eSpares(www.espares.co.uk/usermanuals) ကအဲဒါတွေကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ site မှာ ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေနိုင်မယ့် search bar တစ်ခုပါဝင်ပြီး အဲဒိမှာ ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် မော်ဒယ် နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုမသိဘူးဆိုလျှင် eSpares က သင့်ရဲ့ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာရှာဖွေနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။
Instruction Manuals UK(www.instruction-manuals.co.uk) ကတော့ manuals တွေကိုထိန်းသိမ်းထားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ အဆိုပါ manual တွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်နေရာတွေမှာရှာဖွေနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Manuals များအတွက် Brand အလိုက်ရှာဖွေကာ links များကိုရယူနိုင်ပြီး အခြားသော websites များမှ အကြံပြုမှုများကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် link တစ်ခုကိုရှာဖွေမတွေ့ဘူးဆိုလျှင် သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တင်ကာအခြားသော သုံးစွဲသူများထံမှ ကော်ပီကိုတောင်းခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
UsersManualGuide(www.usersmanualguide.com) မှာ များစွာသော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ LCD မော်နီတာများမှသည် လျှပ်စစ် အော်ဂင်များအတွက် AC adapters များ နဲ့ အနှိပ်ထိုင်ခုံများအထိ လက်စွဲလမ်းညွှန်စာအုပ်များစွာကိုစုစည်းထားပေးပါတယ်။ ဒီ site မှာတော့ search engine မပါရှိပေမဲ့ သင်ရှာဖွေသမျှနဲ့ပတ်သက်ပြီး brand အလိုက် စနစ်တကျစုစည်းပေးထားတဲ့ များစွာသော manuals များကို တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် device တွေကိုမဆို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကို ရှာဖွေခြင်း
အကယ်၍ သင့်ရဲ့ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်မရှိလျှင်တောင်မှ အဆိုပါပစ္စည်းရဲ့ ပြဿနာများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမရလဲဆိုတာသိနိုင်မှာပါ။ eService Info( www.eserviceinfo.com) ဆိုတဲ့ website က သင့်အနေဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ site ရဲ့ database ထဲမှာ ရှာဖွေလို့ရနိုင်မယ့် သုံးစွဲသူလက်စွဲလမ်းညွှန်များ၊ schematic diagrams များ၊ datasheets များ၊ service manuals များ နဲ့ download လုပ်နိုင်မဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ database စနစ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်သူပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းပေါင်း ၂၀၀၀၀ ဝန်းကျင် ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
PDF SB(www.pdfsb.net) ဟာ PDF manuals များ၊ guides များ၊ ebooks များ၊ exam papers များအပြင် ခုံနဲ့ကစားရတဲ့ဂိမ်းတွေရဲ့ ကစားနည်းဥပဒေသစာအုပ်လိုမျိုး တွေပါစုစည်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ site က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုံးစွဲသူလက်စွဲ တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးတည်ထားတာမဟုတ်သလို သူ့ရဲ့ database ထဲမှာ စာအုပ်ပေါင်း ၇၂ သန်း နီးပါးရှိတဲ့အတွက် ရှာဖွေကြည့်ရှုဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒီ site ကိုကောင်းမွန်စွာ စုစည်းထားပြီး အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။ သင်ကြည့်ရှုသော စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ ဆက်စပ်သော စာရွက်စာတမ်းများရဲ့စာရင်းကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ သင့်အတွက်အသုံးတည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တက်ဘလက်မှာ User Guides များကို ရယူခြင်း
Device အသစ်များအနေဖြင့် သင့်ရဲ့ device အဟောင်းများကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်စေရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော iFixit ကဲ့သို့ ‘how to’ apps များကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ free app ကို တက်ဘလက်များနဲ့ ဖုန်းများမှာ ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး Android အတွက် (www.snipca.com/12640)၊ iOS အတွက်(www.snipca.com/12639) နှင့် Window phone အတွက်(www.snipca.com/12642) တို့မှာရယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ app မှာ ရာပေါင်းများစွာသော နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်တဲ့ hard drives များကိုဖြုတ်ခြင်း ၊ပျက်ယွင်းနေတဲ့ မျက်နှာပြင်များလဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းစနစ်များကို သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်တကွ တစ်ဆင့်ချင်းစီ ရှင်းပြထားပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များကို သင့်ရဲ့ပီစီ သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့မှာဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း iFixit ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ (www.ifixit.com) မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ apps မှာသုံးစွဲတာက ပိုပြီးတော့ လွယ်လင့်တကူ အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Devices အသစ်များမှာ သုံးစွဲမှုလမ်းညွှန်များပါဝင်တဲ့ apps များပါဝင်လေ့ရှိပြီး သင့် device အတွက် Google ရဲ့ Play Store, Apple App Store သို့မဟုတ် Windows Phone website များမှာ ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ကာ ဘာတွေ အသစ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ‘Canon PIXMA printer’ ကို Canon ရဲ့free app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PIXMA Printing Solutions( Android ,www.snipca.com/12544; iOS,www.snipca.com/12646) မှာရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ကာ အဲဒိမှာ PIXMA ပရင်တာအားလုံးအတွက် manuals များပါဝင်ပြီး သင့်ရဲ့ andorid တက်ဘလက်သို့မဟုတ် ဖုန်းကနေပြီး ကြိုးမဲ့ print ထုတ်နိုင်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာထုတ်လုပ်သူ Nikon မှာလည်း သူ့ရဲ့ SLR ကင်မရာများအားလုံးအတွက် manual ပါဝင်တဲ့ free app တစ်ခုရှိပြီး အဲဒါကို (Android , www.snipca.com/12541 ; iOS,wwwsnipca.com/12645) တို့မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော နာမည်ကျော် device တွေဖြစ်တဲ့ Raspberry Pi လိုမျိုး device တွေအတွက် မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူများအတွက် လမ်းညွှန်များကို RPi Hardware Guide အား Android အတွက် (www.snipca.com/12543) မှာရရှိနိုင်ပြီး iOS နဲ့ Windows ဖုန်းများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ကာ အဲဒိမှာ များစွာသော အခမဲ့ဥပမာများစွာကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Internet ဗဟုသုတ , နည်းပညာ
✏Advanced Download Manager Pro v3.5.9.6✏
-Android ဖုန်းအတွက်​ ​ဒေါင်းလုဒ်​ဆွဲရာမှာ နာမည်​ကြီးပြီး Grade Power တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ "ADM(Advanced Download Manager) ဆိုတဲ့ Latest PRO Version v3.5.9.6 Apk ​လေးတစ်​ခုကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါပြီ-
-Facebook တို့၊Website တို့၊Blog တို့မှာ တင်​ထားတဲ့၊ဗွီဒီယိုဖိုင်​​တွေ၊Data ​တွေ၊Links ​တွေ၊Ebook ​တွေ၊Pdf File ​တွေ၊Document ​တွေ၊အစရှိတာ​တွေကို လျှင်​မြန်​စွာနဲ့ တည်​တည်​ငြိမ်​ငြိမ်​ ​ဒေါင်းလုဒ်​ဆွဲ​ပေးနိုင်​မယ့်​ Download Manager Application ​လေးဖြစ်​ပါတယ်။
ကိုယ်​​ဒေါင်းချင်​တဲ့ လင့်​ခ်​ကိုလည်း box​လေးထဲ
copy ကူးထည့်​ပြီး၊start ကိုနှိပ်​၍လည်း
Resume Download အတွက်​ပါ အ​ထောက်​ပံ့​ပေးထားတာ​ကြောင့်​ လည်း အသုံးပြုသူများ အဆင်​​ပြေအကြိုက်​​ ​တွေ့​စေမှာပါပဲ-
-ဒီ Application ​လေးကို Google Play Store မှာဝယ်​ယူအသုံးပြုမယ်​ဆိုရင်​ $1.99 ​ပေးဝယ်​ရမှာဖြစ်​ပြီး၊အခုဒီ post ​လေးမှာ​တော့ Free ​
-Apk File Size 1.7MB ​လောက်​ပဲရှိပြီး၊
Android OS Version 2.1 နဲ့အထက်​ရှိထား
​သော ဖုန်းများမှာ ထည့်​သွင်း install လုပ်​၌ အသုံးပြုနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​-
-Apk အား ​အောက်​က လင့်​ခ်​ မှာ​ဒေါင်းယူပါ-
★ADM PRO v3.5.9.6 Apk အား​ဒေါင်းရန်​★
✌ဒီ ADM Pro ​ဆော့ဖ်​ဝဲနဲ့​ဖေ့စ်​ဘုတ်​က video
facebook version v3.9 apk ​လေးကိုပါတွဲပြီး
တကယ်​လို့မိတ်​​ဆွေက facebook အသုံးပြု
​တော့ စိတ်​ချရတဲ့ဗားရှင်းတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ v3.9
apk ကိုအသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။ဒီ v3.9 က​တော့၊
photo comment ​ပေးလို့မရပါဘူး။
ပြီး​တော့ User Interface Design မ​ပြောင်း
ပါဘူး။ဒါ​ပေမယ့်​ Video ဖိုင်​​တွေကိုစိတ်​ချလက်​ချ Download ဆွဲလို့ရ​စေမှာပါပဲ။
fb v3.9 က​တော့Device အားလုံးနဲ့ကိုက်​ညီမှု
အဲ့ဒိ​တော့ video download အသုံးများမယ်​
ဆိုရင်​​တော့ v3.9 apk ကို​အောက်​ကလင့်​ခ်​မှာ
★Facebook v3.9 Apk အား​ဒေါင်းရန်​★
♪ ဈေးနှုန်းကမောက်ကမများဖြင့် အူရီးဒူးဖုန်းများ ဈေးကွက်အတွင်း ပျံ့နှံ့ ♫
♪ ဓါတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက် - High-Speed Camera Plus v2.61 Patched APK ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ High-Speed Camera Plus ဆိုတဲ့ Application လေးကို တစ်ခါမှမတင်ဖူးပါဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးလို့ စမ်းသုံးရင်းသဘောကျသွားလို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း သုံးနိုင်အောင်ပြန် တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး Feature ကတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် Auto Focus ကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းယူနိုင်ပြီး ကြည်လင်ပျက်သားတဲ့ ပုံများကိုရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိပ်များကိုလည်း ကြည်လင်စွာနဲ့ ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ အခြားသော Camera များမှာ မပါဝင်တဲ့ Feature တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Feature တွေကိုအောက်မှာလေ့ လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်သာကလိကြည့်ကြပါ။ Android OS 2.3 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
★★ CCleaner APK Android 2014-07-23 Update (All Android) ★★
အမျိုးအစား: Android Application , Android Cleaner Apk
♪ Animation တွေနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Live Wallpaper - Space Colony v1.3 Apk ♫
အမျိုးအစား: Android , Android Live Wallpaper
★★ Road Truck Simulator 3D Games 2.2 (Android Game) ★★
ဒီကောင်လေးကတော့ Truck ကားအကြီးကြီးတွေကိုမြို့ထဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်မဲ့ 3d ဂိမ်းလေးဖြစ်
ပါတယ် ။ အခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးရုပ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ကစားနိုင်ပါတယ် ။ Simulator ဂိမ်ေးလးဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလိုချင်တဲ့ကားတွေကိုလဲဝယ်ယူမောင်းနှင်လို့ရပါသေးတယ် ။ ဘရိတ် တို့
ဂီယာတို့ ဟွန်းတို့ကအစပါသောကြောင့် Truck ကားအကြီးကြီးတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်မောင်းနေသလိုခံ
စားရပါလိမ့်မေ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 42Mb ရှိပြီး Android: 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာကစားနိုင်ပါတယ် ။
★★ Samsung Galaxy Tab210.1 (Second) P5100 (Root ဖောတ်ပြီး)မြန်မာစာအမှန်ရောင်းမည်။ ★★
Samsung Galaxy Tab210.1 (Second) P5100 ကို root ဖောတ်ပြီးမြန်မာစာ
အမှန်ပါဝင်သော(Second) ရောင်းရန်ရှိပါတယ်။အပွန်းအပဲ့ ၊ ထိခိုက်ပြန်ပြင်ထားခြင်း
လုံးဝမရှိပါ။ Ram အား 1GB ရှိပြီးမျက်နှာအကျယ် 10.1" လက်မရှိပါတယ်။ဖုန်းပြောဆိုနိုင်ပြီး 3G / WiFi ဖြစ်ပါတယ်။Android 4.2.2(JB)Version ဖြစ်ပါတယ်။အပိုပစ္စည်းအဖြစ်မျက်နှာပြင်
စတေကာကပ်ပေးပြီးမန်မိုရီ 4GB အပိုပေးကာ ၊ ကာဗာအိတ်ပါအပိုပေးထားပါတယ်။
★★ World Warships Combat Mod Version: 1.0 APK Unlimited Money (Android Game) ★★
ရုပ်ထွက်ကောင်းပြီး အခန်းရှည်ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ကစားရမှာပါ ။ Unlimited Money ဖြစ်သောကြောင့်
မိမိလိုချင်တဲ့အခန်းလိုချင်တဲ့လက်နက်တွေကိုကြိုက်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 37mb ရှိပြီး
Android : 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာကစားလို့ရပါတယ် ။
★★ Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Multilingual ★★
ကျွန်တော်တို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို နောက်ခံသီချင်းလေးနဲ့ video Slideshow လုပ်လိုတဲ့သူတွေအတွက်
Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable Multilingual လေးတင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါကြောင့်သုံးဖူးတဲ့လူတိုင်းသိကြမှာပါ အခုဒီကောင်လေးကတော့ update လေးပါ အရင်ကထက် effect လေးတွေ stile လေးတွေ format လေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ 32 bit 64 bit နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး
အမျိုးအစား: Photo Editor Software , Photo Slideshow
▼ July ( 581 )
♪ ယခုနှစ်အတွင်း သတ္တုကိုယ်ထည် ဖုန်းကိုသာ မိတ်ဆက်ပေး...
♪ Android အတွက် စွယ်စုံသုံး - System Tuner Pro v3....
★★ Battle Mechs Version: 0.5.589 Mod APK Unlimited...
★★ Bloodstroke Mod APK Unlimited Money Version: 1....
TuneUp Utilities 2014 v14.0.1000.340 + Crack & Key...
♪ Samsung Galaxy Alpha ကို သြဂုတ်လ လေးရက်နေ့တွင်ေ...
★★ Storm of Darkness Mod APK Unlimited Money Versi...
ကမာရွတ်မီဒီယာရဲ့ သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Android...
♪ YouTube က Video နဲ့ Music တွေကို ဖုန်းနဲ့အလွယ်တက...
★★ Trial Xtreme3Mod APK Unlocked and Unlimited M...
♪ မည်သည့် User Manual ကိုမဆို အွန်လိုင်းမှာရှာဖြွေ...
♪ ဈေးနှုန်းကမောက်ကမများဖြင့် အူရီးဒူးဖုန်းများ ဈေ...
♪ ဓါတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက် - High-Speed Came...
★★ CCleaner APK Android 2014-07-23 Update (All And...
♪ Animation တွေနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Live Wallpaper - ...
★★ Road Truck Simulator 3D Games 2.2 (Android Game...
★★ Samsung Galaxy Tab210.1 (Second) P5100 (Root ...
★★ World Warships Combat Mod Version: 1.0 APK Unli...
★★ Ashampoo Slideshow Studio HD3v3.0.6 Portable ...
♪ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည့် Xiaomi Mi...
♪ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ရက် 30 ဖုန်းခေါ်ဆိုခလေ...
♪ Facebook v15.0.0.0.8 Alpha Apk Update (28-July) ...
★★ VLC (VideoLAN) Media Player 2.1.5 (x86) / 2.1.4...
Icecream Image Recorder
♪ မန္တလေးတွင် အော်ရီးဒူးဆင်းမ်ကတ် ရောင်းပြီ ♫
Shwebook Dictionary Pro v 3.3.0 for android(latest...
★★ Modern Combat 5: Blackout Mod APK Unlimited Bul...
Xara Photo & Graphic Designer v10.1.0.34843 With C...
liteCam Recording Software HD v4.3.0.2 with Key Fu...
★★ Chop Chop Ninja APK Full Version (Android Game)...
♪ Ooredoo ၏ ကာတာအခြေစိုက် Mobile Internet Pack ဈေ...
အဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ် Android App
♪ Techspace Journal Vol (3), Issue (17) (29.7.14) ...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-3 ၊ Issue 13 (21....
♪ Windows ကို Shutdown လျှင်မြန်စွာ ချနိုင်မယ့် နည...
Yangon Buses iOS Application
★★ Defense 39 Mod APK Unlimited Coins Version: 1.0...
♪ Facebook တွင် Chat ပြုလုပ်ရန် Messenger App လိုအ...
★★ Zombie Gunship Pro Mod APK V1.1.4 Unlimited Mon...
♪ THE RHYTHM OF FIGHTERS v1.2.0 Apk Update (July-2...
Download Accelerator Manager v4.5.27 Ultimate With...
Glary Utilities Pro 5.4.0.11 Key and Portable Full...
♪ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ပုံကို Screen အပြည့်ပြပေးမယ့် - ...
★★ Shooting Zombie 3D Mod APK Unlimited Coins Vers...
★★ Dead Ninja Mortal Shadow Mod APK V1.1.3 Unlimit...
♪ အသစ်ထွက် iOS8 စတိုင် Laucher အလန်းလေး - Ultimate...
★★ Cool Launcher – iOS7flat style Version : 2.2...
✏Shwebook Dictionary Pro v3.3.0 App for Android✏
♪ အော်ရီဒူး (မြန်မာ) ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်စမ်းသပ်မှုမျ...
IDrive Online Backup Free v6.1.0.13 Final Full Ver...
♪ Locker လှလှလေးတစ်ခု - Galaxy Locker v3.1.3 Apk ♫...
iSkysoft Video Converter Ultimate v5.2.0.0 Multili...
★★ MediaFire Version : 1.1.1 (All Android) ★★
သုံးစွဲသူများ မသိရှိသေးသည့် Google ၏ လုပ်ဆောင်ချက်...
♪ ဖုန်းထဲက App: တွေရဲ့ Icon ကိုလိုသလိုပြောင်းပေးနိ...
★★ Smash Bandits Racing Mod APK v1.08.11 Unlimited...
★★ Kinux icons Pack Version : 2.1.1 Apk ★★
★★ SL Theme MIUI style Version : 1.2 Apk (All Andr...
Love Measure Apk
World Music Playlist Apk
★★ Planet Stronghold Mod APK Unlocked Full + Bonus...
♪ လိပ်နင်ဂျာဖိုက်တင်ဂိမ်း - Teenage Mutant Ninja T...
Brand New Galaxy Tab3 [ KOREAN MADE / CLONE ]
♥♥ PhotoSuite3Photo Editor APK Android ♥♥
♪ Original ပါသော App: များကိုဖယ်ထုတ်ပေးမယ့် - Syst...
Dawn Of the Apes livewallpaper(1)
Dawn Of the Apes livewallpaper(2)
Spyrix Free Keylogger 6.2
Windows 8.1,8,7,Office 2007,2010,2013 Activator [M...
♪ Batman Arkham Origins v1.2.4 [Mod Money] APK (18...